Amagumbi ale mihla kwinkqubo ye-condo abekwe kufutshane neZdrojowy Park eBusko-Zdrój kwi-Świętokrzyskie Voivodeship.
Amafulethi agqitywe ngezona zinto zisemgangathweni, ngokuhambelana nemigangatho ephezulu yehotele, ebhekisa kuyilo lweBristol **** Art & Medical SPA.
Nganye ixhotyiswe ngekhitshi elisebenzayo. Indlu nganye ine-balcony yayo okanye i-terrace.
Umtsalane owongezelelweyo weBristol Aparthotel yiGreen Roof, apho unokuphumla khona ngeentsuku ezinelanga.
Njengenxalenye yokuhlala kwabo, iindwendwe zinokufikelela simahla kwizinto ezinomtsalane kwihotele yaseBristol, efana nale:
• I-pool icocwe nge-nanosilver
• Igumbi leCardio
• Iindidi ezi-4 ze-saunas: IsiFinnish, umphunga, i-bio kunye ne-infrared
• Indlela yeKneipp
Kwindawo yokuchithela impilo: eBusko-Zdrój, kufuneka uphefumle ucocekile, umoya wokuchithela iholide - ngokukhethekayo kwi-Spa Park enomtsalane, eyilwe ngumakhi odumileyo wenkulungwane ye-19 uHenryk Marconi. Kukwafanelekile ukubona icawa ye-baroque ye-Immaculate Conception yeNtombi Enyulu esikelelekileyo, icawa yamaplanga yaseSt. ULeonard ukususela ekupheleni kwenkulungwane ye-17 kunye neevillas zembali.
Umoya wembali: ePonidzie ungawonwabela amatye ezikhumbuzo amaninzi achaza imbali enesiphithiphithi sale ndawo. Kuya kufuneka undwendwele i-basilica ye-Gothic yokuZalwa kweNtombi Enyulu uMariya ukusuka ngo-1350 kunye neNdlu yaseDługosz eWiślica exhaswa ngemali ngumbhali odumileyo, enye yezindlu zesikhungu ezindala zasePoland ePińczów, indawo yenkulungwane ye-13 emva kweFranciscan e-Nowy Korczyn kunye I-abbey yaseCistercian eJędrzejów.
Iqhutywa ngemoto kunye neewotshi: enye yezona zinto zinomtsalane kulo mmandla nguloliwe omxinwa we-"Ciuchcia Express Ponidzie", ohamba ngendlela enomtsalane ukusuka ePińczów ukuya eJędrzejów. Ukutyelela kwisixeko sokugqibela kufuneka kudibaniswe nokutyelela kwimyuziyam yodwa yeesundials ePoland.
Ezinyathelweni zikaKoziołek Matołek: i-quadruped ehlekisayo, eyenziwe nguKornel Makuszyński, yahamba ihlabathi lonke ifuna iPacanów. Namhlanje, kule dolophu, i-25 km ukusuka eBusko, unokubona umfanekiso webhokhwe kwaye u tyelele i-European Fairy Tale Centre, eyakhiwe ngokukodwa ngokuhlonipha kwakhe. Abantwana baya kuvuya.